I-Hamlets e-West Haven - Imibhede engu-5 Amagumbi okugeza angu-3
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Clement
U-Clement unokuphawula okungu-1211 kwezinye izindawo.
Siyakwamukela kuHolide Elimnandi Lasekhaya! Eyasungulwa ngo-2010, manje sesikhule saba ngaphezu kuka-2000+ amakhaya amahle e-Walt Disney World e-Orlando Florida, futhi sesamukele izinkulungwane zezivakashi ezijabule ezindlini zethu. Uma unombuzo mayelana namakhaya ethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi futhi Ithimba lethu Lokubhuka lizokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza. Sizoqinisekisa ukuthi uthola ikhaya elihle elifanelana nezidingo zakho zeholide lakho elilandelayo lephupho endaweni yase-Orlando!
Le Villa enhle inamakamelo okulala ayi-5 namagumbi okugeza angu-3, alala izivakashi ezifika kweziyi-10. Itholakala kumaHamlets amahle emphakathini waseWest Haven, leli khaya liqhele ngamamayela ayi-8 kuphela ukusuka eWalt Disney World Theme Park edumile emhlabeni. Uma ufuna intokozo eyengeziwe kanye nenjabulo evela ku-Universal Studios kanye ne-Islands of Adventure, iqhele ngamamayela angu-18. Wonke amakhaya esiwahlinzekayo aphethwe ngokomsebenzi futhi ahlome ngokugcwele ukuqinisekisa ukuthi uzoba nokuhlala okunethezekile nokukhululeka. Iyunithi izohlanzwa futhi ilungiswe ngaphambi kokufika kwakho, ukuze uqale ukuphumula uma usufikile. Njengamanje sinikela ngezindlu eziyi-1000+ nezindawo zokuhlala endaweni yase-Orlando, futhi sizoba nokuthile ngosayizi ofanele kanye nesabelomali sakho. Uma unemibuzo, sicela ungangabazi ukuxhumana nethimba lethu lokubhuka!
Ibanga le-Disney 8 amamayela. Ibanga lokuya ku-Universal 18 miles. Ibanga eliya esikhumulweni sezindiza amamayela angu-24.
Umphathi wezakhiwo oqeqeshiwe uyatholakala 24/7 uma udinga ukuba nemibuzo noma udinga usizo.